WordPress Event Sidebar ကို Google Calendar (နှင့်အခြား Google Fun!) ကိုအသုံးပြုပြီး Update လုပ်နည်း။ | Martech Zone
ဂူဂဲလ်ပြက္ခဒိန်ကို သုံး၍ iCal မှ WordPress Event Sidebar ကို Update လုပ်နည်း။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဇူလိုင်လ 30, 2008 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ယခုတပတ်ငါအဘို့အကြှနျုပျ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေး site ကိုတက်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည် Google Apps ကပ။ ကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်လိပ်စာသည်နှစ်များအတွင်းနှင့်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်စပမ်တောင်ပေါ်သို့ရောက်နေပါပြီ ငါ့အိမ်ရှင် Spam Protection အတွက်အီးမေးလ်လိပ်စာတစ်ခုလျှင် (၁.၉၉ ဒေါ်လာ) တောင်းခံပါမည် Gmail ကို အခမဲ့ပြုလုပ်သည် ဂျီမေးလ်မှာလည်းသင်ဟာသန်းပေါင်းများစွာသောသုံးစွဲသူတွေတည်ဆောက်ထားတဲ့ algorithms တွေနဲ့အလုပ်လုပ်နေတယ်။
Google Talk တံဆိပ်
ငါမသိသောဂူဂဲလ်အပလီကေးရှင်းသို့ပြောင်းခြင်းအတွက်နောက်ထပ်အကျိုးကျေးဇူးများရှိသည်။ ပထမတစ်ခုကတော့ Google ရဲ့ Instant Messaging application ကို Talk လို့ခေါ်တယ်၊ ပြီးတော့ငါ့ sidebar မှာaကနေတစ်ဆင့်ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းနိုင်တယ် Google Talk တံဆိပ်.
အဖြစ်ကောင်းစွာ, ငါသည်ယခုရရှိပါသည် Google အသိပေးချက်ငါအီးမေးလ်ရသောအခါသတိပေးနှင့်, ယနေ့ကဲ့သို့, ဂူဂဲလ်အပလီကေးရှင်းနှင့်အတူပေါင်းစည်းနှင့်ငါအဖြစ်ကောင်းစွာပြက္ခဒိန်ဖြစ်ရပ်များသောအခါငါသတိပေး။ ဒါဟာအလွန်သေးငယ်သော application ဖြစ်ပါတယ်
ဂူဂဲလ်ပြက္ခဒိန် iCal ထပ်တူပြုခြင်း
ယခုအပတ်တွင်ကျွန်ုပ်၏မိတ်ဆွေဘီလ်က CalDav ၏ Google Calendar ၏အထောက်အပံ့နှင့် iCal နှင့် Google Calendar တို့အားတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်နိုင်မှုအကြောင်းတင်ပြသည့်အခါယခုအပတ်တွင်အကြီးမားဆုံးသတင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ တော်တော်ရိုးရှင်းပါတယ်
iCal Preferences ကိုဖွင့်ပါ
သင်၏ Google Email Address နှင့် Password ကိုရိုက်ထည့်ပါ
ကျွန်ုပ်၏မူလပြက္ခဒိန်ကိုကျွန်ုပ်၏ WordPress sidebar တွင်မျှဝေလိုခြင်းမရှိခဲ့ပါ၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ဂူဂယ်လ်ပြက္ခဒိန်တွင်အခြားပြက္ခဒိန်တစ်ခုကိုထည့်သွင်းပြီးနောက်၎င်းကို iCal တွင်လည်းထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ရှိပါတယ် သင်၏အလယ်တန်းပြက္ခဒိန်များကို iCal နှင့်စည်းညှိရန်လမ်းညွှန်ချက်များ။ ၎င်းသည်အခြား URL တစ်ခုသာဖြစ်သည်။
Google Calendar WordPress ပေါင်းစည်းမှု
နောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့ install လုပ်ဖို့ပါ Google Calendar WordPress ပလပ်အင် သင်၏ပြက္ခဒိန်မှဖြစ်ရပ်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြသည့် Sidebar သို့ဝစ်ဂျက်တစ်ခုထည့်ရန်။ ဒီပလပ်အင်နဲ့မတူကွဲပြားတဲ့အချက်အချို့ရှိပါတယ်။
တစ်ဦး sign up ပြုလုပ်ပါ ဂူဂဲလ်ဒေတာ API ကို Key၊ Plugin ရဲ့ settings ထဲကို ၀ င်ဖို့သင်လိုအပ်လိမ့်မယ်။
သင်၏ပြက္ခဒိန် feed အတွက် XML လိပ်စာကိုထည့်သောအခါ၊ url ၏အဆုံး node ကို 'full' ဖြင့်အစားထိုးပါ။ ထို့ကြောင့်လိပ်စာသည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
ဝစ်ဂျက်ခေါင်းစဉ်ကို WordPress အရမပြပါ API ကို နှင့်ပုံမှန်ဝစ်ဂျက်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း။ တစ်စုံတစ်ယောက်က Google Code တွင်ဤပြင်ဆင်ချက်ကိုတင်ရန်လုံလောက်သော်ငြားထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးပါ။ ဒီနေရာမှာဘာ code အတွက်လမ်းညွန်ဖြစ်ကြသည် ဝစ်ဂျက်ခေါင်းစဉ်ပြissuesနာများကိုပြင်ဆင်ရန်အစားထိုးပါ.
ဒီအပြည့်အဝပေါင်းစည်းထားခြင်းဖြင့်ယခုငါ Google Notifier (သို့) iCal ကိုသုံးပြီးကျွန်ုပ်၏ sidebar မှာဖော်ပြမယ့်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုထပ်ထည့်နိုင်သည်။ iCal နှင့် Google ကြားရှိသင်၏အချိန်ညှိနိုင်မှုပေါ်မူတည်သည်။
သြဂုတ် 5, 2008 မှာ 8: 29 AM
ဒါ အရမ်းကောင်းတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ အစီအစဉ်စာရင်းမှ ပြက္ခဒိန် ဖိဒ်သည် ကျွန်ုပ်၏ PR ဆိုက်အတွက် ပြီးပြည့်စုံသော ထပ်လောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်- http://www.indy-biz.com!
သင်သည် WordPress ပေါ်ရှိလူတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြပြန်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
11:2009 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 11, 53 တွင်
အဲဒါကောင်းတယ်။ အစီအစဉ်ပြက္ခဒိန်များစွာကို စမ်းကြည့်ရာ သင့်လျော်မှုမရှိပါ။ အထက်ဖော်ပြပါအချက်များမှလွဲ၍ Google wpng ပလပ်အင်သည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ပြီးတော့၊ ကျွန်တော် ဇာတ်ညွှန်းရေးတာ ဗဟုသုတ လုံးဝမရှိပါဘူး။ ဒီတော့…
ဧပြီ 26, 2009 မှာ 7: 16 pm တွင်
အပေါ်က ပိုစတာတွေကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ထပ်လောင်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
သင်၏ လျင်မြန်ပြီး ထိရောက်သော အမြင်ဆိုင်ရာ ဥပမာများသည် html မှ wordpress သို့ ပြောင်းလဲနေသည့် ဝဘ်မာစတာအတွက် မယုံနိုင်လောက်အောင် အထောက်အကူ ပြုပါသည်။